Caafimaadka - Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
QOF KASTA AYUU UGU BAAHAN YAHAY IN LAGA HELO DARYEELKA CAAFIMAADKA AASAASIGA AH IYO XORRIYADDA OO LAGA GAARO GO'AANO KU SAABSAN CAAFIMAADKOODA
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie, waxaan ka caawinnaa shaqsiyaadka iyo qoysaska inay helaan oo ay dayactiraan Medicaid iyo Medicare isla markaana ay helaan caymiska adeegyada daryeelka caafimaad ee ay u baahan yihiin.
Waxaan ka caawinnaa dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah inay helaan caawinaadda loo baahan yahay inay ku sii jiraan guryahooda ama ay helaan caymis daryeel muddada-dheer ah.
Waxaan awood u siineynaa dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah inay mas'uul ka noqdaan go'aanadooda daryeel caafimaad iyadoo loo marayo awooda qareenka. Markii loo baahdo, waxaan ka caawinaa xubnaha qoyska inay helaan waalidnimo ama awood kale oo sharci oo ay ku daryeelaan kuwa ay jecel yihiin.
Waxaan ka caawinnaa dadka qaba HIV + ama kuwa qaba AIDS inay helaan daryeelka iyo adeegyada ay u baahan yihiin.
Bulshooyinka qaar, waxaan lashaqeynaa bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee Iskaashiga Caafimaadka-Sharciga si loo bixiyo adeegyo dhameystiran iyo wax ka qabashada baahiyaha sharci ee bukaanka.
ADEEGYADA AYAGA KU DARAN
Diidmada kaalmada caafimaadka, joojinta, arrimaha hoos u dhaca (Medicaid, Medicare)
Codsiyada SSI / SSD ee loogu talagalay dadka qaba HIV-AIDS
Ka bixida guryaha kalkaalinta
Adeegyada daryeelka guriga
Ilaalinta dadka waaweyn si loo hubiyo helitaanka daryeelka caafimaadka
Awoodaha qareenka iyo awaamiirta kale ee hormarinta